Wholesale Jiuqu Hongmei West Lake Gongfu Nhema Tea Mugadziri uye Mutengesi | Maokun
Jiuquhongmei inonzi "Jiuquhong", inova imwe yechigadzirwa chetsika yechibhakera muRuwa rweXihu uye hupfumi pakati pematei matema. Iyo hwema hune hwomutambarakede muchero unotapira uye caramel kunhuhwirira, muto wetii unotapira uye wakapfava, une humwe huremu, hauna kugadzikana kwemuromo, uye ine zvishoma astringency. Mushure mekunwa, muromo zviri pachena kuti unotonhorera. Nyowani uye nenyasha, sekuona mukadzi anotapira weJiangnan.
Jiuqu Hongmei Chibviro
Jiuqu tsvuku plamu tii inogadzirwa kumahombekombe eRwizi rweQiantang, munzvimbo dzeHubu, Shangbao, Zhangyu, Fengjia, Shejing, Shangyang, neRenqiao kumatunhu ekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweHangzhou. Inodaidzwa kuti Jiuqu Oolong uye ndeyechikamu cheiyo nhema tii.
Jiuqu tsvuku puramu yekugadzira maitiro
Jiuqu tsvuku puramu kunhonga mureza kunoda bundu rimwe nemashizha maviri kukura; inogadziriswa kuburikidza nekuoma, kuumburuka, kuvirisa, kubheka uye nezvimwe maitiro.
Pasi pemamwe mamiriro, mashizha matsva anosvava anorasa zvakaenzana mvura, kuitira kuti simba rekuzvimba kwesero ridzike, uye hunhu hwemashizha huve hunyoro, izvo zviri nyore kutenderera kuita zvidimbu, zvichigadzira mamiriro epanyama ekuumburuka. Nekurasikirwa nemvura, maseru emashizha anononoka kuisa pfungwa uye iyo enzyme chiitiko chinowedzera, zvichikonzera imwe nhanho yekuchinja kwemakemikari mune zvirimo, kugadzira makemikari mamiriro ekuvirisa, nekuparadza huswa gasi.
Chinangwa chekuumburuka ndechekuumburudza mashizha akaoma kuita mitsetse pasi pechiito chemaoko emagetsi, kunyatsoparadza maseru maseru emashizha, kufashukira muto wetii, uye kugadzira polyphenol oxidase mumashizha kusangana nemishonga ye polyphenol, uye kushandisa chiitiko che okisijeni mumhepo kusimudzira Sezvo iko kuvirisa kuri kufambira mberi, nekuti yakakangwa muto wetii unodhonzwa pamusoro pemashizha, kana mashizha eti achinge abikwa, izvo zvinonyungudika zvinonyungudika muto yetii kuwedzera kusungwa kwesobho yetii .
Kuvira kunowanzo svauka. Pahwaro hwekuumburuka, ndiyo kiyi yekuumba ruvara uye kunhuwira kweti nhema. Iyo ndiyo nzira huru yekushanduka kwemashizha matsvuku shanduko, inowedzera kumisikidzwa kwema enzymes, inosimudzira iyo oxidative condensation ye polyphenols, uye inogadzira rakasarudzika ruvara uye kuravira kweti nhema. Pasi pemamiriro ezvinhu akakomberedza ezvemamiriro ekunze, mashizha anogona kunyatso kuviriswa, kudzikisira hwema hwakasvibira uye hunopisa, uye nekugadzira hwema hwakasimba.
Parizvino, inowanzo shandiswa Maocha yekuomesa michina inosanganisira otomatiki maomesa, ruoko louver maomisi uye kuomesa matanga. Rudzi rwechipiri rweti nhema rwakaomeswa kaviri, yekutanga kuomesa inonzi Mao Huo, iyo yepakati yakanyatso pararira uye kuomeswa, uye yechipiri kuomesa inonzi Foot Huo. Maohuo masters mutemo wekupisa kwepamusoro uye nekuchimbidza, unodzivirira enzyme chiitiko, inorasikirwa nehunyoro mumashizha, uye inonyatsopararira pakati kuita unyoro mumashizha. Goverana patsva kuti usaome kunze nekunyorova mukati, asi kupararira hakufanirwe kunge kwakanyanya uye nguva yacho haifanire kunge yakarebesa, zvikasadaro inozokanganisa hunhu. Iwo musimboti wekushisa kwakadzika uye kunonoka kunonoka kunogoneswa nemakumbo etsoka, uye iwo hunyoro huchave huchiputirwa nepakati kuti uwedzere kunhuwirira.
Pashure: Dianhong Gongfu tii ndeyeboka revatema tii
Zvadaro: Qimen Nhema Tea Yekutanga Qi Hong Jinzhen 2021 Nyowani Tea
Dianhong Gongfu tii ndeyeye nhema tii ca ...
Lapsang Souchong Nhema Tea Harney & Vanakomana F ...